Imigomo Yokusebenzisa - Micro-Semiconductor.com
Imigomo yokusetshenziswa ye-Micro-Semiconductor.com:
Lesi sivumelwano sichaza ngemigomo nemibandela ye-www. I-Micro-Semiconductor.com, uma unanoma yimuphi umbuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi!
Sicela ufunde leli gama lokusetshenziswa kanye nesitatimende sobumfihlo ngokucophelela ngaphambi kokuthi ubhalise ku-Micro-Semiconductor.com .uma nje ubhalise ngempumelelo, amamenyu owafundile, wavuma futhi wamukela yonke imigomo nemibandela ngokusetshenziswa nesitatimende sobumfihlo. sizoshicilela inguqulo ebuyekeziwe ku-Micro-Semiconductor.com, uma siguqule lesi sitatimende. konke okuqukethwe kwesivumelwano kuzoqala ukusebenza ngosuku lokushicilelwa. uma ungavumi lokhu kubuyekezwa, kufanele ubunqamule ubudlelwano ne-Micro-Semiconductor.com.
1, UKUBHALISA KWABASEBENZISI:
1), Ukufaneleka Komsebenzisi:
Wonke umsebenzisi we-Micro-Semiconductor.com kumele abe yiNkampani noma umuntu ongasayina isivumelwano se-omnibus esisemthethweni ngaphansi komthetho. Sicela ungasebenzisi insizakalo yethu uma ubungafaneleki. Awukwazi ukudlulisa noma ukuthengisa i-akhawunti yakho ye-Micro-Semiconductor.com. I-Micro-Semiconductor.com inelungelo lokumisa noma lokuqeda i-akhawunti yakho ngokuvumelana nezifiso zabo.
2), Ukubhalwa kwento:
Bonke abasebenzisi kumele banikeze ngemininingwane yangempela, evumelekile ku-Micro-Semiconductor.com, ukuze kuqinisekiswe ibhizinisi elijwayelekile. Uma kukhona ushintsho, sicela wazise futhi ubuyekeze ku-Micro-Semiconductor.com ngokushesha.
Bonke abasebenzisi be-Micro-Semiconductor.com bayavuma ukwamukela ama-imeyili nemiyalezo evela kubalingani be-Micro-Semiconductor.com noma i-Micro-Semiconductor.com.
I-Micro-Semiconductor.com inesitatimende sobumfihlo esisetshenziswe kubo bonke abasebenzisi kufaka phakathi isivumelwano somsebenzisi. Kufanele ufunde futhi wamukele isitatimende sobumfihlo ukuze usebenzise i-Micro-Semiconductor.com lapho ubhalisa, futhi uzobhekana nezingqinamba zomthetho (kanye ne-Micro-Semiconductor.com noma iyiphi inguqulo ebuyekeziwe yesitatimende sobumfihlo) esikhathini sabasebenzisi be-Micro-Semiconductor.com.
1), Ngaphambi kokuvuma, mayelana nayo yonke imininingwane yedatha yomsebenzisi, igama langempela, ikheli, ikheli le-imeyili, imininingwane yokuxhumana..njl. I-Micro-Semiconductor.com ngeke isetshenziselwe ezinye izinjongo.
2), Sebenzisa imininingwane engeyona eyakho. I-Micro-Semiconductor.com izoqoqa imininingwane yomuntu siqu ngekheli le-IP, kufaka phakathi izakhiwo ze-Browser, uhlobo lohlelo olusebenzayo, igama lesizinda le-ISP elinikezela ngezinsizakalo zokufinyelela, njll. Ukuze ukwandise ikhasi lesikrini sekhompyutha. I-Micro-Semiconductor.com futhi yenza izibalo zokugeleza komsebenzisi futhi ithuthukise ukuphathwa nensizakalo ngokuqoqa imininingwane engenhla.
3), ukuphepha kwedatha yomuntu siqu. I-Micro-Semiconductor.com izovikela imininingwane yakho yedatha ngemishini yokulawula ukusetshenziswa kweseva ephephile.
4), Ukudalulwa kwedatha yomuntu siqu nokuvinjelwa. I-Micro-Semiconductor.com izohlinzeka ngemininingwane yomuntu siqu ngokusho komnyango osebenza ngokomthetho noma ngenhloso yokuphepha komphakathi, lapho uhulumeni ecela i-Micro-Semiconductor.com ukuthi iveze imininingwane yomuntu siqu ngokuya ngezinqubo ezisemthethweni. I-Micro-Semiconductor.com ayithathi isibopho ngaphansi kwezimo ezinjalo. Lapho uhlangabezana nale mibandela elandelayo, i-Micro-Semiconductor.com izosebenzisa imininingwane yakho ngaphezu kwebanga elidingekayo: Sesivele sithole imvume yakho, imithetho nezinqubo ezihambisanayo zicela i-Micro-Semiconductor.com ukuthi inikeze abasebenzisi imininingwane yolwazi lwedatha.
Bonke abasebenzisi lapho bethenga kufanele bathobele le migomo elandelayo:
1), Abasebenzisi kufanele bahambisane nayo yonke imithetho esebenzayo, imithethonqubo, imithetho kanye nemithetho yendawo eceliwe lapho basebenzisa isevisi ye-Micro-Semiconductor.com nokuthenga. Udinga futhi ukuqinisekisa ukuthi uyayigcina le migomo yokusetshenziswa nesitatimende sobumfihlo kufaka phakathi yonke imigomo nemithetho yemibhalo engenhla.
2), Unesibopho sokuqedela ukuthengiselana nge-Micro-Semiconductor.com lapho uthenga, ngaphandle kwebhizinisi elinqatshelwe ngokwemigomo yokusetshenziswa nemithetho. Lapho usufake ama-oda, uzokwamukela imigomo nemibandela ebekiwe encazelweni yezimpahla, inqobo nje uma le mibandela yebhizinisi isemthethweni futhi ingaphansi kwalesi sivumelwano.
3), Ukukhangisa, uhlu lwamanani nezitatimende ku-Micro-Semiconductor.com akusona isipho. Sinelungelo lokukhumbula imininingwane ohlangothini olulodwa, lapho i-Micro-Semiconductor.com ithola ukuthi izinombolo zezingxenye nama-PO kusobala ukuthi azilungile noma azikho esitokweni. I-Micro-Semiconductor.com inelungelo lokuthenga umkhawulo wamanani. Uma ufaka i-oda, uyavuma futhi ukuthi useminyakeni esemthethweni yokuthenga lezi zimpahla, futhi unesibopho sobuqiniso bayo yonke imininingwane oyinikezile ku-oda.
4), intengo yomkhiqizo nokutholakala kuzocaciswa kusayithi. Lolu hlobo lwemininingwane luzobuyekezwa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Inkokhelo yokulethwa izolungiswa ngokuhlukile ngokuya ngezindlela ezahlukahlukene zokuthumela ozikhethayo. Uma ngabe kukhona izingozi, ngokwesibonelo, umphakeli unyuse intengo, ushintsho lwe-VAT, noma iphutha lesistimu ye-Micro-Semiconductor.com, zonke izizathu zibangela ukubuyekeza intengo ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda, i-Micro-Semiconductor.com izothumela i-imeyili noma ishayele ukwazisa lolu lwazi, unganquma ukuthi uyalukhansela i-oda noma cha.
4, QUALITY NANGOKUTHENGISWA KWENKONZO:
1), Bheka isevisi yangemva kokuthengisa.
2), Imikhiqizo ikhwalithi.
Imikhiqizo ye-Micro-Semiconductor.com izothobela umthetho kahulumeni kanye namazinga obuchwepheshe. Uma ngaphandle kwamazinga wangaphambilini, sizokwenza ngokuvumelana nezinga lomkhiqizi, uma ngaphandle kwazo zonke izindinganiso ezingenhla, amakhasimende angaxoxa futhi anqume phakathi kwe-Micro-Semiconductor.com. Noma iyiphi inkinga yekhwalithi noma ngaphandle kwamazinga emikhiqizo, abasebenzisi bangacela ukubuyisa noma ukufaka okunye esikhundleni sayo.
5, UKUVIKELEKA KWE-WEBSITE:
Uzokwamukela ukuthi awukwazi ukufaka iwebhusayithi nganoma yiluphi uhlobo lwerobhothi, iSpider noma i-Refresh software nganoma iyiphi injongo ngaphandle kwemvume ye-Micro-Semiconductor.com efomini yokubhala.
Ngaphezu kwalokho, uyavuma ukuthi ngeke:
1), Noma yikuphi ukuziphatha okungenangqondo nokungalingani okungalayisha ngokweqile iwebhusayithi ye-Micro-Semiconductor.com nge (Ngokuqonda kwe-Micro-Semiconductor.com).
2), Ngaphandle kokubhala imvume ye-Micro-Semiconductor.com, shintsha, ukopishe, udlulise, wenze imisebenzi etholakele, isabalalise noma ibukeke kuWebhusayithi (ngaphandle kwemininingwane yakho yangasese).
3), Phazamisa noma uzame ukuphazamisa ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi noma noma yikuphi ukucubungula isenzo kuwebhu.
4), Sebenzisa noma yikuphi okuqukethwe okungavunyelwe ngumthetho nemithetho ehlobene.
5), Sebenzisa noma yiliphi igciwane, iThrojani yehhashi, igciwane lesikelemu, i-timebomb, khansela ama-bots, iqanda le-Easter, i-spyware noma olunye uhlelo lwekhompyutha olungalimaza, lubuyekeze, lususe, umphumela omubi, ukubamba okuyimfihlo, inkontileka noma ukuthatha izintambo ukuze kusetshenziswe noma yiluphi uhlelo, idatha noma imininingwane yomuntu.
6, ISITATIMENDE SAMALUNGELO OKUPHAKATHI KWENGQONDO:
Ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba, imfihlo yezohwebo nawo wonke amalungelo ahlinzekwa yi-Micro-Semiconductor.com wonke angaka-Micro-Semiconductor.com. ngaphandle kwemvume ye-Micro-Semiconductor.com, noma ngubani noma ilungu ngeke likwazi ukulanda, ukukopisha, ukudlulisa, ukubukeza nokuhlela. Ngaphandle kwalokho kuzothwala wonke umthwalo osemthethweni. I-Micro-Semiconductor.com inelungelo lokukhumbula iseva yedatha ye-Micro-Semiconductor.com lapho umsebenzisi esebenzisa insiza.
I-Micro-Semiconductor.com ibophezelekile ukunikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi isebenza ngendlela efanele, Zama ukugwema ukuphazamiseka kwensizakalo, noma ukuphazamisa umkhawulo wesikhathi ngesikhathi esifushane, qiniseka ukuthi umsebenzisi angasebenza kwi-inthanethi ngokushelelayo. Kepha ngenxa yokuphoqelelwa ngamandla noma ezinye izizathu azikwazi ukulawula, zenze i-webhusayithi iphahlazeke noma ingakwazi ukusebenzisa, kube nomphumela kwirekhodi elithile, umyalezo noma imininingwane elahlekile, i-Micro-Semiconductor.com iwukunganaki: futhi noma imuphi umsebenzisi unikela ngemininingwane engalungile noma engagcwalisiwe nengamanga engakwazi ukusebenzisa insiza ye-Micro-Semiconductor.com noma ihlulwe enye ilahlekelwe, i-Micro-Semiconductor.com iwukunganaki.
Lesi sivumelwano ngazo zonke izindlela silawulwe yimithetho yaseHong Kong. Le webhusayithi bonke abasebenzisi banomnikazi we-Micro-Semiconductor.com ongenakuguqulwa ongaphansi kwegunya lenkantolo nenkantolo ephakeme. Izinhlinzeko zalesi sivumelwano ziyahlukaniswa, Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi sivumelwano kuthathwa njengokungekho emthethweni noma okungenakuphoqeleka, ukuhlinzekwa kungasuswa bese izinhlinzeko ezisele zizokwenziwa.